Caalamka Online » WAR DEG DEG AH: Warkii ugu cuslaa oo kasoo kordhay Booqashadii Farmaajo ee Puntland & Duleedka Laascaanood oo uu tagi doono + Somaliland oo dagaal xoogan….
WAR DEG DEG AH: Warkii ugu cuslaa oo kasoo kordhay Booqashadii Farmaajo ee Puntland & Duleedka Laascaanood oo uu tagi doono + Somaliland oo dagaal xoogan….
Wararka Warsidaha Puntlandnews.net uu haatan ka helayo madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in wax ka badal lagu sameeyey booqashadii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagi lahaa deegaanada Puntland isla markaasna qorshe kale uu soo galay meesha.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa qorshaynaysa xiligani in madaxweyne Farmaajo uu kordhiyo muddada booqashadiisa deegaanada Puntland isla mar ahaan taana uu booqasho taas la mid ah ku tago deegaano ka tirsan maamulka Somaliland.
Deegaanka Badhan ee Bariga gobolka Sanaag ayaa kamid ah goobaha uu cagta dhigi doono madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale qaybo kamid ah gobolka Sool oo ay kamid tahay degmooyinka Taleex, Boocame, Tukaraq iyo deegaano dhaca duleedka magaalada Laascaanood kuwaas oo xaalad indha indhayn ah ku samayn doono madaxweynuhu.
Ciidamada maamulka Somaliland ayaa iyaguna heegan xoogan dhankooda laga jira, waxaana madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi amar ku bixiyey in guud ahaanba weerar culus lagu qaado waftiga madaxweyne Farmaajo hadii uu soo gaadho deegaano ka tirsan goboladda Somaliland oo todobaaadkani booqasho salmi ah ku yimid deegaano ka tirsan wasiirka wasaaradda Qorsheynta Soomaaliya oo qayb ka ahaa waftiga hor dhaca ah ee loo soo diray Somaliland.
Lama oga ilaa iyo hada waxa maamulka Somaliland ka yeeli doono booqashada madaxweyne Farmaajo inkastoo xaaladu ay sii xumaan karto markasta oo Farmaajo gudaha u galo deegaanada Somaliland.
One Response to WAR DEG DEG AH: Warkii ugu cuslaa oo kasoo kordhay Booqashadii Farmaajo ee Puntland & Duleedka Laascaanood oo uu tagi doono + Somaliland oo dagaal xoogan….
Maxamed nugule says:
Waa Arina ficn weeye farms job